Ireo Seminera Manana Tranok'alan'i Spam Filaminana an-tserasera izay tsy maintsy ezahanao
Igor Gamanenko, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa lasa spam amin'izao fotoana izao ny spam amin'izao fotoana izao, ary mihoatra ny valopolo isan-jato amin'ny fifamoivoizana mailaka dia tsy misy dikany sy tsy misy dikany. Midika izany fa tsy azo atao ny mandefa mailaka amin'ny alàlan'ny mailaka raha tsy misy fiarovana amin'ny spam. Mandritra izany, ny mailaka tsy ara-barotra tsy manara-dalàna (UCE) dia hafatra hafahafa nomerika antsoina hoe spam. Amin'ny tranga sasany, dia tsy mampidi-doza tanteraka izany ary tsy miteraka olana, fa indraindray, mety hampiditra cod sy viriosy ratsy ao amin'ny rafitry ny ordinateranao sy ny tranonkala. Raha mandinika mailaka marobe nalefa eran'izao tontolo izao ianao, dia tokony hanara-maso ny filaharan'ireo spam email sy hanandrana ny rehetra hahita ny mifanaraka amin'izay takinao.
Adin-tsarimihetsika fananganana adilao:
Ny votoatin'ny tranonkala ho an'ny olon-dehibe dia iray amin'ireo karazana mailaka be mpampiasa indrindra ary ny sivana ampiasaina amin'izany dia antsoina koa hoe filamin'ny spam adult. Indraindray ireo mpampiasa aterineto sy spammers dia manaitra ny mpampiasa vokatra sy serivisy natao hampitomboana ny herim-po. Izy ireo dia mamela backlinks amin'ny tranonkalany na adi-pihetseham-po ary te-hampiroborobo ity zavatra ity ao amin'ny aterineto. Nandritra ny taona vitsivitsy dia nanomboka namorona sivana ho an'ny spam ny votoatin'ny olon-dehibe..Raha hamorona sivana toy izany ianao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny faritry ny sahan'ny adiresy mailaka, mamorona sivana ary ampidiro URL iray ho an'ny tranokala olon-dehibe izay efa nahatezitra anao nandritra ny fotoana fohy.
Fahasalamana sy fahasalamana spam filters:
Ity karazan-tsarimaila mailaka ity dia mahasoa ho an'ireo tranonkala sy sendikan'ireo dokam-barotra mahakasika ny lanjany, ny fitsaboana amin'ny fikarakarana ny hoditra, ny fanafody fitsaboana aretina, ny fanafody tsy misy nentim-paharazana sy ny Sinoa, ary ny fanampiana amin'ny sakafo. Raha manana tranonkala ianao, dia azonao atao ny mametraka plugin misy plugin manan-danja mba hisorohana an'ity spam ity. Ary raha nahazo ireo tolotra sandoka ireo ianao dia alefaso fotsiny ny sivana ary ampio ireo ID ireto amin'ity sivana ity mba hisakanana azy ireo tsy handefa hafatra mampiahiahy amin'ny ho avy.
Filaharana spam politika:
Niparitaka ny politika spam tamin'ny endrika fandrahonana ara-politika sy ny hetsika fanodinkodinana. Mpikatroka, mpampihorohoro, ary hackers dia tafiditra amin'ny fampielezana an'ity tranonkala ity amin'ny aterineto. Olom-po izy ireo ary tsy manaja ny soatoavin'ny olombelona. Izany no mahatonga azy ireo tsy mandefa mailaka an-tserasera amin'ny andavanandro ary tsy miraharaha ny fiarovana na ny lalàna momba ny fampiharana ny lalàna mihitsy. Ny solontenan'ny spam politika dia mora mamorona, ary afaka manampy anao hanaisotra ireo mailaka mampiahiahy, mety ho loza mety hitera-doza, ary ny mety ho very ny volanao.
Marina fa loza mitatao ho an'ny mpampiasa aterineto ny spam, ny viriosy, ny malware ary ny mailaka. Ny hackers sy spammers dia mampiasa teknika samihafa mba hamporisika antsika sy hangalatra ny volantsika. Raha toa ka tsy namorona sivana ho an'ny mailaka tahaka izany ianao, dia tokony hiala amin'ny mailaka tsy nahaliana ianao izay mety ahitana tolotra orinasa tsy ara-dalàna, valim-boka, virosy, malware, ary karazana spam rehetra mety hiteraka olana lehibe ho anao. Amin'ny lafiny iray na amin'ny iray hafa, ny adiresy mailaka dia olana goavana, fa ny filtres dia misy hamaha ny ankamaroan'ny olana ateraky ny aterineto Source .